केदार घिमिरे "माङ्ने बुडा" लाई बाबुले मिडीयाको सामुने यसरी बनायो रूनु न हास्नु बनायो। - नमस्ते खबर
केदार घिमिरे “माङ्ने बुडा” लाई बाबुले मिडीयाको सामुने रूनु न हास्नु बनायो।
नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले पुराना नेपाली फिल्मलाई संरक्षण र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले डिजिटाइजेशन तथा रेष्टोरेशन गर्ने भएको छ । बोर्डको २०७४ पुस २४ गते अध्यक्ष निकिता पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो योजनाको निर्णय गरेको हो ।
निर्णयले ‘आमा’ सहित १२ वटा नेपाली फिल्मलाई पहिलो चरणमा डिजिटाइजेशन गर्न लागेको हो । पुराना रिल प्रविधिबाट बनेका फिल्महरू खुइलेर तथा नष्ट भएर जानसक्ने भएकोले त्यसलाई नयाँ डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तर गरी संरक्षण गर्न लागिएको अध्यक्ष निकिताले जानकारी दिइन् ।
पुराना फिल्मलाई डिजिटाइजेशनको प्रक्रियामा लैजान विकास बोर्डले यसअघि नै एउटा समिति बनाएको थियो । समितिले पुराना फिल्महरुलाई क्रमशः डिजिटाइजेशन प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरेको छ । डिजिटाइजेशन भएपछि सबै १६ एम्.एम्. र ३५ एम्.एम्.का फिल्महरु अब २ के. र ४ के. फर्म्याटमा हेर्न सकिनेछ ।
आगामी असार १६ गते चलचित्र विकास बोर्डको वार्षिकोत्सवमा नेपाली फिल्मको निर्माण, उत्पादन शुरु भएको ५० वर्ष नाघेको स्वर्णकालको उपलक्ष्यमा सप्ताव्यापी रूपमा ती फिल्महरूलाई फिल्म फेस्टिवलको रूपमा प्रदर्शनीसमेत गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ । पुराना फिल्मलाई डिजिटाइजेशन गरी एकसातासम्म प्रदर्शन गर्न लागिएको अध्यक्ष निकिता पौडेलले बताइन् ।
फिल्मको पोजेटिभ क्यारेक्टर अर्थात्, स्टाइलिस्ट, बान्की अनुहार, सुडौल शरीर, सुकिलो-मुकिलो । अर्कोतर्फ भिलेन अर्थात्, फिल्मको नेगेटिभ क्यारेक्टर- धुस्रो, फुस्रो, डरलाग्दो, घिनलाग्दो । केही वर्ष अगाडिसम्मका फिल्ममा हिरो र भिलेनको परिभाषा यस्तै बुझिन्थ्यो ।
तर, आजभोली नेपाली फिल्ममा भिलेनहरु हिरोको लुक्सलाई नै टक्कर दिने खालका हुन थालेका छन् । एक यस्तै अभिनेता हुन् अनुप विक्रम शाही । उनलाई कति फिल्ममा पोजेटिभ र कतिमा नेगेटिभ भूमिकामा दर्शकले हेर्दै आइरहेका छन् । हालै मात्र उनले डरलाग्दो भिलेन (निगम बाबा) को रुपमा काम गरेको फिल्म ‘कृ’ रिलिज भएको थियो ।
अब उनी यही फागुन २५ गते पण्डित महाराज बनेर पर्दामा आउँदैछन् । फिल्म हो ‘हुर्रे’ । यसअघि उनलाई पण्डितको भूमिकामा दर्शकले देखेका थिएनन् । फरक-फरक भूमिका गर्न रुचाउने अनुप यस फिल्मका लागि आफ्नो लोभलाग्दो केस मुण्डन गरेको तितो अनुभव सुनाउँछन् ।
‘मेरो हातमा ब्याक टू ब्याक फिल्म थियो, जसका लागि कपाल अनिवार्य थियो । तर म आफ्नो भूमिकामा कञ्जुस पनि गर्न हिचकिचाउँदिनँ । सायद सबै कलाकारका लागि आफ्नो कपाल काट्नु पर्ने चाहीँ सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो जस्तो लाग्छ । मैले न्याचुरल देखियोस् भन्नका लागि केस मुण्डन गरेँ ।’ अनुप भन्छन् ।
आफ्नो मान्छे पशुपति मन्दिरमा पण्डित भएका कारण पनि ‘हुर्रे’ मा ‘महाराज’ को भूमिका निर्वाहा गर्न सजिलो भएको उनको भनाई छ । आफ्नो फरक-फरक अवतारका कारण चर्चामा रहने अनुपको पहिलो पटक पण्डित अवतार दर्शकका लागि पक्कै नौलो हुनेछ ।
उनले आफूलाई भर्सटायल एक्टरको रुपमा स्थापित गर्नका लागि पनि फिल्म ‘हुर्रे’ मा निर्वाहा गरेको भूमिकाले दर्शकको ध्यान खिच्न आवश्यक छ । र, बक्सअफिसमा सुखद नतिजा पनि । ‘महाराज’ को भूमिकालाई पनि दर्शकले एसेप्ट गर्नेमा उनी भने ढुक्क छन् ।
उनी थप्छन्, ‘फरक भूमिका निर्वाहा गर्दा ममा कति अभिनय क्षमता रहेछ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । यसकारण पनि मलाई नौलो क्यारेक्टर गर्न मन पर्छ ।’ उनले पण्डितकै भूमिकामा फिल्म ‘कमलेको बिहे’ मा पनि काम गरेका छन् ।
एमालेले राष्ट्रपतिको नाम टुङ्गो लगायो बर्तमान राष्ट्रपति बिध्या देवि भण्डारी दोहरिने